Frank Lampard Oo Tababaraha Kooxda Chelsea Ee Antonio Conte U Sheegay Qaabka Uu Liverpool Ku Garaaci Karo Iyo Shaki Uu Ka Qabo In Uu Taladiisa Qaadan Karo. – WWW.Gool24.net
Halyayga kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hor kulanka ay kooxdiisii hore ee Blues la ciyaari doonto Liverpool waxa uu Antonio Conte siiyay habka ugu fiican ee uu ku kala dhantaali karo kooxda Jurgen Klopp isla markaana ay guul kaga gaadhi karaan Reds. Frank Lampard ayaa hadalkan jeediyay mar uu ka hadlyay BT Sport oo ka mid yahay khabiirada kulamada Champions Leaque falanqeeya.
Chesea ayaa guul wayn xalay ka soo gaadhay kooxda Qarabag waxayna u soo baxday wareega 16 ka kooxood ee UEFA Champions Leaque iyada Willian uu laba gool dhaliyay isla markaana ay Hazard iyo Fabregas ay min la gool oo rekoodhayaal ah dhaliyeen.
Laakiin Frank Lampard ayaa aaminsan in haddii uu Antonio Conte kulanka Liverpool uu wada ciyaarsiiyo Willian iyo Eden Hazard in ay dhibaato wayn u gaysan karaan Reds si la mid ah qaabkii uu Conte xili ciyaareedkii hore u adeegsaday Diego Costa, Willian iyo Eden Hazard.
Frank Lampard ayaa dareensan in xili ciyaareedkan uu Conte kaydka inta badan ku hayo xidiga ree Brazil ee Willian laakiin waxa uu xidigii hore ee ree England uu ku dooday in Conte uu leeyahay maskax Talyaani ah in uu ku ciyaaro koox difaac ahaan amaan u ah isaga oo sii sheegay in Bakayoko uu ka door bidi doono Willian kulanka Liverpool.
Frank Lampard oo ka hadlaya sida wada safida Willian iyo Hazard ay muhiimka ugu tahay kooxdiisii hore ee Chelsea ayaa yidhi: ” Haddii ay jirto wax su’aal ah oo ka soo baxaysa kulanka caawa (xalay) waxay tahay in xili ciyaareedkii hore aynu in badan aragnay Willian iyo Hazard oo weerarka ku xeeran. Sanadkii hore waxa uu ahaa Costa isla markaana hadda waa Morata”.
Laakiin Frank Lampard oo Conte talo ku siinaya sida uu Liverpool dhibaato ugu gaysan karo kulanka Anfield ee sabtida ayaa yidhi: “Tagi taanka Liverpool, anigu waxaan dareensanahay in labadan (Hazard iyo Willian) ay xaqiiqdii dhaawici karaan Liverpool, laakiin miyuu Conte la tagi doonaa ilaalin badan isla markaana uu dib u soo celin doonaa Bakayoko?”.
Frank Lampard su’aasha sare iskaga jawaabaya ayaa yidhi: “Isagu waa Talyaani, sidaa daraadeed, waxaa laga yaabaa in maskax ahaan uu ahaan doono in uu wax ilaaliyo”. Frank Lampard ayaa doonaya in halkii uu Bakayoko ka ciyaari lahaa kulanka Liverpool uu Conte shaxdiisa ku soo wada bilaabo Hazard iyo Willian isla markaana uu Alvaro Morata weerarka hogaamiyo.